အောက်တိုဘာအလှပန်း – ပိုးအိဖြူဇင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cover Faces » အောက်တိုဘာအလှပန်း – ပိုးအိဖြူဇင်
အောက်တိုဘာအလှပန်း – ပိုးအိဖြူဇင်
Posted by kai on Sep 24, 2014 in Cover Faces, Interviews & Profiles | 24 comments
ညီမနာမည်က ပိုးအိဖြူဇင်ပါ။ အသက်ကတော့ ၂၀ ပါ။
ပိုးအိ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ၂၀၁၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ စလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မတင်မိုးလွင်ရဲ့ Talent & Model agency မှာ Part ~ Time Model လုပ်ရင်းနဲ့ပါ ။
အခုဆို အနူပညာအလုပ်တွေ လုပ်တာ ၃ နှစ်ကျော်ပါပြီ။
ညီမရဲ့ ဝါသနာကတော့ အေင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်ချင်တာပါ။
ညီမ Modeling အလုပ်လည်း လုပ်ရင်း ပြိုင်ပွဲတွေလည်း အများကြီး ပြိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
Miss Ngwe Saung 2011 ,
Miss People 1st runner up 2011 ,
Miss Tourism 1st runner up 2012 ,
Miss Tourism Photogenic 2012 ,
Miss Taw Win 2nd runner up ဆုတွေလည်း ရရှိထားပါတယ်။
ညီမ အခုလက်ရှိ TV Commercial, MTV နဲ့ Movies Seeies တွေလည်း ရိုက်ကူးနေပါတယ်။
ညီမကို ဒီထက်ပိုပြီး ပရိတ်သတ်ကြီးက အားပေးကြပါဦးလို့ ။
ညီမလည်း ပရိတ်သတ် လက်ခံနိုင်တဲ့ အောင်မြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်လို့ ဆန္ဒပြုရင်း…
အဆက်အပေါက်လေး လှမဲ့ သဘောရှိ..
အနော့် အပေါက်လား.. မမဂျီးးး
ရန်ကုန်ဘူတာကြီးလားကွယ် အနောက်က အဆောက်အဦးက။
အဲဒါမြို့တော်ခန်းမခင်ဗျ…။ ရန်ကုန်လည်လည်လာရင်.. ဘုရားချည်းလှည့်ဖူးပြီး.. လိပ်ဥရှာနေတာ.. ဒါမျိုးတွေကျဘယ်သိတော့မလည်း..။
(နောက်တာနော.. စိတ်မဆိုးနဲ့ဦး။ ဦးကြီးခကတော့.. တကယ်သိတယ်.. မှတ်ပါတယ်..။)
ပြောရရင်.. အင်္ဂလိပ်တွေ တိုးရစ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်လာလည်ပတ်ကြတာ.. သူတို့ကိုလိုနီလက်ထက်တွေမယ်… သူတို့ဆောက်ခဲ့တဲ့.. ကိုလိုနီအဆောက်အဦးတွေကြည့်ချင်.. ပြချင်.. နောင်လာနောက်သားတွေကို.. ကြွားချင်တာတ၀က်မကပါသဗျ…
တွေ့လား.. ငါတို့ကမ္ဘာကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်က.. ဒီလိုဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျီုးပေါ့..
အဲဒီ.. သဘောတရားကို.. နားလည်ထားရင်..မြန်မာ့ တိုးရစ်ဇင်အလုပ်တွေ..ဖွံ့ဖြိုးပြီး.. တနှစ်လူ၁၀သန်းလောက်လာလည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ်.. ထင်..။
မှတ်ချက်။ ။ လူ၁၀သန်း.. တယောက်ဒေါ်လာ ၂ထောင်ဖိုး.. မြန်မာပြည်ထဲသုံးသွားရင်.. မြန်မာပြည်ဝင်ငွေ ၂ဘီလီယန်.. အလုပ်အကိုင်.. မီလီယန်ချီတိုးတယ်လို့သာ ယူဆကြစေလို…။
ရှက်ရှက်နဲ့ တစ်ခု ပြောရရင်….
သများက အဲဒီ မြို့တော်ခန်းမနဲ့ ဘူတာနဲ့ လုံးဝကို မကွဲပြားဘူးးး
အဲ့ဒီရှေ့မှာ..ဆန္ဒပြနေတာတော့ ဟုတ်ပါဘူးနော်.. ။
အဲဒီ မြို့ တော်ခန်းမ ရှေ့က…
ဆန္ဒပြနေတဲ့ မြေသိမ်းခံပြည်သူတွေရဲ့…တဲတွေ..စီစီ ရီရီ….
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအထိ.. ရှိတုန်းပဲ…
ကြုံမှ ပြမယ်.. ။
….အဲဒီ.. သဘောတရားကို.. နားလည်ထားရင်..မြန်မာ့ တိုးရစ်ဇင်အလုပ်တွေ..ဖွံ့ဖြိုးပြီး.. …တနှစ်လူ၁၀သန်းလောက်လာလည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ်.. ထင်..။ …အဲ့တခုထဲမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် သူကြီးရယ်…. ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထက်ဈေးမြင့်နေပြီး …၀န်ဆောင်မှု မပြည့်တဲ့ …..ဟိုတယ်တွေရယ် .. ချာတူးလန် …အချိန်မမှန်ဈေးကြီးတဲ့ … ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေ.( ရန်ကုန်ဘန်ကောက် သွားပြန် ..Nok Air ။ ..အဲအေးရှား ဒေါ်လာကိုးဆယ် မှ တစ်ရာခန့်…) ( ရန်ကုန်မန်းလေး တစ်ကြောင်း ..အဲပုဂံ ဒေါ်လာ 120 ) ..ရှုံ့ချည်နှပ်ချည်လုပ်နေတဲ့ လူဝင်မှု …ဥပဒေတွေရယ်…
..၀န်ဆောင်မှုပိုင်း အတွေ့အကြုံနုနေသေးတဲ့ ခရီးသွားကုန်ပဏီတွေရယ် ..ခရီးသွားလမ်းညွှန်တွေရယ်…….အလုပ်မဖြစ်သေး..မထွန်းကားသေးတဲ့ ငွေလွှဲ ….ဘဏ်စနစ်တွေရယ်. ..
..ယခင်နှစ်…ယခုနှစ်..ကိန်းဂဏန်းများအရ …အင်္ဂလိပ်တိုးရစ်တွေက …အများဆုံးဝင်ရောက်သူများမဟုတ်….
ဒီလိုပဲ.. ချိန်ဆ..ညှိမျှရင်း.. အလုပ်ကသင်သွားမယ်ထင်ပါ့…။
လူတွေနဲ့အတူတူ.. ငွေတွေပါလာသမို့.. အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်အရ.. လည်ပါတ်မှုဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်..။
ကိုလိုနီဆိုတာက.. ဥရောပနဲ့.. အနောက်နိုင်ငံ(အခုပထမနိုင်ငံများရဲ့).. သမိုင်းတွင်အောင်မြင်မှုကြီးတခု…။
ဒါကို.. လူဖြူတွေ.. အများဆုံးလာကြည့်မယ်လို့သာ.. ရည်ရွယ်ရင်းပါ..။
ရွေတိဂုံဘုရားပုံ.. ပို့စ်ကဒ်၊ ပန်းချီထုတ်ရောင်းတာထက်.. ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦ၊ စိန့်မေရီဘုရားကျောင်းပုံ ထုတ်ရောင်းတာက.. ဈေးကွက်ပိုကြီးမယ်… ဆိုတဲ့..လမ်းညွှန်ကြည့်ယုံသက်သက်ပါ..။
တိုးရစ်ဇင်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ.. မပြုတ်ရေးချရယ်တဲ့မှ.. မပြုတ်…။
..နောက်တခု….စကားအတင်းစပ်…မြန့်ကျန့်လေဆိပ်တွေ …တစ်နှစ်ဆယ်သန်းလက်ခံနိုင်မယ့် ဆားဗစ်ကက်ပက်စတီ..
.ဆယ်သန်းမပြောနဲ့ ..တစ်သန်းဆိုရင်တောင် ..ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေ.လွန်းထိုးသယ်ပို့နိုင်တဲ့..အင်အားမရှိ…..
…Myanmar Air transportation outlook ဆိုပြီး.. ကွကိုယ် လုပ်ထားတဲ့ …အချက်အလက်အတိအကျနဲ့…စာတမ်းတောင်ရှိ….အားရစရာတစိဆိုတစိမှမရှိ….
…ဘာဆိုဘားမှမရှိ….သူကြီးကိုပေးမယ့် ..The Report 2014 ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုလဲ ..အယုံအကြည်မရှိ….ခု 24 ရက်က နယူးရောက်…Grand Hyatt မှာလုပ်နေတဲ့ …Myanmar investment Outreach 2014ဖိုရမ် ကိုလဲ အယုံအကြည်မရှိ…အဟိဟိ
..ဒီကြားထဲ ..မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးတဲ့ ဂီဂီကရှိ
….http://burma.irrawaddy.org/business/2014/09/27/65266.html ..အဟိဟိ ..ကျော်ပဲမယုံသလားဆိုတော့ ..ဘူမှလဲမယုံ…သက်သေလေးတွေ့လို့ မလာတာ ..
တမင်တကာ တလွဲ မန့်ကြည့်တာပါ
ဒါမှသဂျီး ပြန်ရေးမှာလေ ဟုတ်ဘူးလား ဗျ။
အောက်က ပြောနေတုန်း တင်လိုက်တော့ကွန်းမန့် ၂ ခုဦးသွားပြီ ဟီး
ကြုံလို့.. အဲဒီမြို့တော်ခန်းမရဲ့.. လင်န်းစကိတ်ပြင်တဲ့သူကို.. ပြောချင်တာက.. ဒီလိုအဆောက်အဦးမှာ.. သူ့ဂုဏ်ရှိပြီးသားကို.. အပေါ်ထိုးထောင်ထွက်လာမယ့်.. အုံးပင်လိုလို. အပင်တွေစိုက်ပြီးကွယ်အောင်လုပ်ထားတာကတော့.. တော်တော်ကို.. မသိသားဆိုးလှတယ်လို့…။
မှတ်ချက်။ ။ အရင်စစ်အစိုးရတုံးကလို.. အဲဒီတိုက်အပေါ်ကနေ.. အောက်ကလူထုကို.. ဓာတ်ပုံချောင်းရိုက်.. သေနတ်နဲ့ချောင်းပစ်မှာမို့..(တမင်ကို) အမြင် ကွယ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုလည်း. တမျိုးပေါ့..
လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်နှင့် ပေါင်တိုစတိုင်က သိပ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မလိုက်ဖက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်သာ ရှိနေရင် ဘာပြောမယ် မှတ်နေလဲ
ငါ လွတ်လပ်ရေးရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တာ ခုလို အရမ်းဟော့ဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်လပ်ဖို့ ခေတ်မီအမြင်ရှိဖို့လို့ ပြောမယ်ထင်မိပါတယ်..
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက.. ပုဂ္ဂလိကတဦးချင်းရဲ့.. အပြင်အဆင်.. အ၀တ်အစား..စတိုင်လ်တွေကို.. မဝေဖန်ပါဘူး..။
သူဆိုလိုချင်တဲ့.. ဖာသည်နိုင်ငံရဲ့အဓိပ္ပါယ်ပေါ်အောင်.. မြင်သာအောင်.. အောက်မှာ.. ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းဖတ်ကြည့်ပါနော..။
ဆိုဗီယက် ယူနီယံ ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ တော်လှန်ရေး လုပ်ပြီးတုန်းက စစ် အတောအတွင်း မှာ လုပ်တဲ့ ကွန်မြူနစ် စနစ် ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ စစ်ပြီး တဲ့နောက် (New Economic Policy) ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ စီးပွားရေး စနစ်နဲ့ လုပ်ရတယ်။ နောက် ငါးနှစ် စီမံကိန်းတွေ ဆိုဗီယက် ယူနီယံမှာ လုပ်တယ်။ ငါးနှစ် စီမံကိန်းတွေ လုပ်တဲ့ အခါ ပထမ စီမံကိန်း လုပ်တုန်းက တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အခြေအနေ အားလုံးကို ခြုံပြီး ရှေ့ရှု ပြီးတော့ တစ်တိုင်း တစ်ပြည်လုံး ရဲ့ ကောင်းဖို့ ရှေ့ရှုပြီး လုပ်ရတဲ့ အတွက် လူတွေဟာ စားချင်တိုင်း မစားရဘူး၊ ၀တ်ချင်တိုင်း မ၀တ်ရဘူး၊ နေချင်တိုင်း မနေရဘူး အဲဒီလို ဖြစ်နေရတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည် ထူထောင်ကြမယ် ဆိုရင် ( National Planning ) ခေါ်တဲ့ အဲဒီလို စီမံကိန်းမျိုးနဲ့ မလုပ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် ဘယ်တော့မှ မကြီးပွား နိုင်ဘူး။ မထူထောင် နိုင်ဘူး ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိစေချင်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ပဒေသာပင် မြေက ပေါက် မလာနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်မှ ပေါက်မယ် ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ နားလည် စေချင်တယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရပင်ရငြား သော်လည်း တိုင်းသူပြည်သား လူအများ အပေါ် ကျရောက် လာမယ့် တာဝန်တွေ ကျွန်တော်တို့ မထမ်းဆောင် ချင်ဘူး ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ရတဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဟာ ဒီနေ့ ရပြီး နက်ဖြန်ခါ တခြား လက် ပြန်ပါသွားမယ် ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိစေချင်တယ်။ အဲဒီလို လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့အခါမှာ စီမံကိန်း အမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်တောင်မှ အနှစ် နှစ်ဆယ် လောက် ကြာမယ်။
အဲဒီလို မလုပ်နိုင်လို့ ရှိရင် ယိုးဒယားပြည်ရဲ့ အဆင့်အတန်း တောင်မှ မီမှာ မဟုတ်ဘူး။ ယိုးဒယားပြည်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံထဲမှာတော့ ညံ့ညံ့ပဲ၊ သို့သော် လည်းပဲ ယိုးဒယား ပြည်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်နဲ့ စာလျှင် သာတာပဲ။ စစ်တပ်တွေ ကောင်းကောင်း ရှိတယ်။ ရေတပ်တွေ ရှိတယ်။ လေတပ်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုဟာတွေ ယိုးဒယားပြည်က ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မှာတော့ အဲဒီလိုဟာတွေ မရှိသေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ သုညက စပြီး အကုန်လုံး ပြန်ပြီး အုတ်မြစ်ချပြီး အလုပ်လုပ် ရမှာ ဖြစ်တော့ ကျွန်တော်တို့က တခြား နိုင်ငံတွေက ခြေလှမ်း တစ်လှမ်း လှမ်းရင် ကျုပ်တို့က ခြေလှမ်း လေးငါးဆယ် လှမ်း လှမ်းမှ နောက် ဆယ်နှစ် (၁၅) နှစ် လောက် ကြာလို့ ရှိရင် တန်းတူညီတူ ဖြစ်နိုင်မယ်။ တန်းတူညီတူ မဖြစ်သမျှ ကာလပတ်လုံး တိုင်းပြည်ကြီး ဟာ လွတ်လပ်တယ် ဆိုပေမယ်လို့ ဟိုလူ မြင်လည်း မျက်နှာ ချိုသွေးရ၊ ဒီလူမြင်လည်း မျက်နှာချို သွေးရတဲ့ ဖာသည် နိုင်ငံမျိုး ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား တို့ကို အတိအလင်း ပြောလိုက်မယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး၊ လူထု ညီညွတ်ရေး ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။ စားဖားတွေ ညီညွတ်ရေး ကို မလိုချင်ဘူး။
ဒီလ သတင်းစာထဲ က ပိပိလေး ပုံ လေး ကို အကြိုက်ဆုံးပါ။
မျက်နှာကြည်ကြည် လေး နဲ့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
သူ့ကာတွန်းပုံလေး ကလဲ အတော်အဆင့်မြင့်တယ်။
ပြိုင်ပွဲ တွေ ဝင်ပြီး ဆုရအောင် ကြိုးစားပါလို့ ပြောပေးပါရှင့်။
နိုင်ငံခြားသားတွေ တော့ အုပ်ထဲ့လိုက်အုံးမှာဘဲ ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့
လုပ်ကိုင်စားသောက် နေကြတဲ့ အမြင်ကို ပြင် ပြီး
အလည်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားလဲ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလို ၀င်ကြေးတွေ တည်းခိုခန်းခတွေ ကို ညှိနိုင်းပေးလိုက်ရင်
ဥပမာပေးရ ရင် စားတော့ စားကြည့် ချင် တယ် မတန် ဘူး ထင်တော့ ၀ယ် မစား ဘူး ဆိုတာမျိုးပေါ့
ဟိုအင်န်ဝိုင်မှာလုပ်တဲ့ 3M ပွဲရောသတင်းစာထဲမထည့်ဘူးလား…သများအမျိုးတွေပါတယ်..
အဲဒါ.. အဲဒီလုပ်တဲ့သူတွေကို ပရက်စ်ရလိစ်တောင်းထားတာ.. မရသေး..